Lalao iPhone | Ny lalao tsara indrindra ho an'ny iPhone 6, 5s, 5c, 5, 4s ary 4 | Vaovao IPhone
Inona avy ireo lalao tsara indrindra ho an'ny iPhone? Miankina amin'ny tsiron'ny tsirairay avy izany, ao amin'ny App Store misy lalao isan-karazany, ary an'arivony amin'izy ireo, ho an'ireo mpilalao indrindra sy ho an'ny mpilalao tsindraindray.
Mazava ho azy, amin'ny fijerena fotsiny ny tabilao eo ambony dia hahita ireo lalao manaitra izay tian'ny olona rehetra isika.
Avy amin'ny lalao an'ny mascotas ho an'ny mpihaino rehetra toa Pou amin'ny angano Candy crush saga, ohatrinona ny vola vokariny isan'andro amin'ny fividianana voarindra (angamba ilay app izay nahatonga ny fividianana tafiditra ho lamaody).
Raha tianao ny lalao an'ny sehatra ho hitanao ny tsara indrindra, raha tianao ny lalao RPG na ny Tifiro izy ireo afaka mandany ora sy ora maro ianao, fiara, moto, paikady… Ary bebe kokoa amin'ny iPhone ihany.
iSIKA Manoro hevitra izahay andramo ny lalao sasany izay efa teo amin'ny lisitra bestseller tamin'ny daty hafa: CSR Racing, Jetpack Joyride, Sky Safari, Monument Valley, Threes, Leo's Fortune, Dots, Bubble Witch Saga 2, Asfalta 8: mahazo haavo, Rayman fiesta Run, Combat Modern 4: Ora Ora, Fanjonoana maneso, Elatra kely, Blade Infinity, Plants vs Zombies ary tapaho ny tady… manomboka amin'ireo izay azonao antoka fa nahafinaritra anao am-bolana maro.
Avelanay etoana ny sasany amin'ny volavolanay
Ny lalao mpihazakazaka tsy misy farany mampiankin-doha
Ny lalao malaza indrindra ho an'ny retrogamers
Vaovao farany amin'ny lalao iPhone
ny louis padilla hace 1 herinandro .
Taorian'ny volana maro niala tamin'ny fitaovana Apple, niverina tamin'ny iPhone sy iPad i Fortnite. Misaotra...
Ubisoft, mpamorona ny lohateny Rainbox Six, lalao tifitra tetika, dia nanamafy fa miasa amin'ny dikan-teny ho an'ny fitaovana…
Alto's Adventure: Spirit of the Mountain dia azo alaina ao amin'ny Apple Arcade
Apple Arcade dia manohy ny fanitarana tsikelikely. Na dia tsy nahomby aza dia mbola resy lahatra i Apple hanolotra ity famandrihana ity ho an'ny…
ny Jordi Gimenez hace 2 volana .
Tsy isalasalana fa ny fahatongavan'ny Call Of Duty Warzone amin'ny fitaovana iOS sy Android dia…
Battle Royale 'Apex Legends Mobile' ho an'ny iOS dia halefa any amin'ny firenena folo amin'ny herinandro ho avy
Hanomboka amin'ny herinandro ho avy any amin'ny firenena 10 hafa ny lalao Apex Legends Mobile. Ity no vaovao tsara...
ny Karim Hmeidan hace 4 volana .
Misy fotoana tsy maintsy gaga amin'ny vaovao rehetra manodidina ny tontolon'ny teknolojia. Hitanay ny fomba nidiran'i Apple…
ny Ignatius Room hace 4 volana .
Tamin'ny Mey 2021, nandre vaovao izahay fa hiverina amin'ny iOS tsy ilaina ny Fortnite ...
PUBG no lohatenin'ny ady royale voalohany nampalaza an'ity karazana ity eran'izao tontolo izao, na dia H1Z1 aza no voalohany…
Ny Magy Telo amin'ny findainao miaraka amin'ireo fampiharana ireo
ny Ignatius Room hace 5 volana .
Saika hamarana ny fetin’ny Noely, hifarana amin’ny fomba ofisialy ny 6 janoary izao, rehefa...
The Lord of the Rings: War dia manampy hetsika dimy hankalazana ny Krismasy
Ny developer NetEase dia te-hankalaza ity Krismasy ity miaraka amin'ireo mpilalao rehetra amin'ny anaram-boninahitra vaovaon'ny asan'i JRR Tolkien ...
Tamin'ny volana aogositra lasa teo, ny sehatra famandrihana lalao Apple Arcade, dia nihoatra ny lalao 200 azo alaina. Maro ny...